Kutumira Dry Type Transformer
Kutumira 12sets yakaoma-mhando transformer kuQingYuan, China pa2021.11.11. Panguva yekutumira, tinofanira kuita zvakanaka pakudzivirira kwezvinhu. chii chakaoma-mhando transformer: 1.Kurasikirwa kwepasi, kuderera kwechikamu, kuderera kweruzha, kupisa kwakasimba kwekupisa, uye kunogona kushandiswa pa 120% yakarongwa mutoro pasi pemhepo inotonhora. ...
Shandura ye SCB13-400/10
Scb13-400kva yakaoma mhando transformer kushanda kuvimbika kunonyanya kuenderana nekugadzira uye kugadzira yakaoma mhando transformer, zvimiro zvemukati, asi zvakare zvine hukama nekuchengetedza nekugadzirisa, yakaoma mhando transformer inosimudzira zvakanyanya kuenderera mberi kwekugadzirwa uye hupenyu hwakaoma ...
Prefabricated transformer ye630KVA uye 800KVA kuendesa kunzvimbo
Isu tinoendesa yakafanogadzirirwa substation ye800kva uye 630kva kunharaunda yeShantou neZhongshan. Iwo angangoita 6T kune imwe seti. Prebabricated substation (inozivikanwawo seEuropean box transformer), zvinoenderana neGB/T17467-1998 standard uye IEC1330 standard. Rexible kuisirwa, yakaderera kurasikirwa, yakaderera ...
shengte zuva nezuva kushanda.
na admin pa 21-07-28
Mumazuva gumi apfuura, tanga tichiedza kubata zvinhu. Pakupera kwemwedzi uno, tichapedza 4 seti dzeEuropean transfoma, 4 seti American transfoma, gumi nematanhatu seti matransformer uye mabhechi maviri eGCK emagetsi makabati. Yese transformer, kabati yega yega, isu tinotorawo ruzivo rwese se ...
Nguva China, Yese Nzira Mberi
"Vadzidzi, nekufambawo". Musi waKurume 27, 2019, kambani yedu yakaronga vashandi kuti vatore chikamu mumakwikwi emakiromita makumi mashanu ekufambisa mabasa erubatsiro kuChina. Muchiitiko ichi, ShengTe Electric yakaratidza tsika yekambani yekubatsirana uye rudo uye yakasimba timu cohe...